Home Somali News Somaliland: Golaha Guurtida Oo Muddo xileedkoodii u kordhiyay Xukuumadda Iyo Golaha Wakiiladda
Xildhibaanada Golaha Guurtida Somaliland, ayaa muddo sanad iyo toban bilood ah u kordhiyay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo.
Xoghayaha Golaha Guurtida Cabdilaahi Ibraahim Habane ayaa warbaahinta u akhriyay go’aanka ay isla qaateen Goluhu, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Golaha Guurtidda JSL , ayaa isagoo tixraacayay warqada Madaxwaynaha JSL ee LrJSL/M/GG/81/2-3218/04/2015 ee25/04/2015, kuna saabsanayd nuxur ahaan ka waajibaad qaadashada dibu- dhaca ku yimid doorashadii Madaxtooyada iyo Golaha Wakiiladda, kuna lifaaqnayd warqaddii koomishanka doorashooyinka qaranka, ayaa gudo galay muddo korodhsiimada .
seddexda xisbi qaran iyo komishanka doorashooyinka; Markii uu qiimeeyey xaaladka , iyo duruufaha ka jira Gobolladda iyo Degmooyinka Bariga iyo guud ahaanba dalka JSL ;
gelinta muwaadinka iyo cod-bixiyeyaashu dhammaanba dalka JSL , si ay u suganto is- raacsananta
dhul ahaaneed iyo dad ahaaneedba ee Dastuurku waajibiyay ;Markii uu yaqiinsaday in go’aankii ay ku cayimeen Koomishanku wakhtiga doorashadu u ahaa mid baalmarsan,waa faqsanayna Dastuurka iyo shuruucda dalka, iyago sammeeyay muddo korodhsiimo anay awood sharciyeed u lahayn ;
Markii uu si mugleh u qiimeeyay xaalaadka dhaqan/dhaqaale bulsho, iyo nabadgalyaba, guud ahaanba , gaar ahaana saamaynta dhaqaale ee colaadda ka oogan gacanka
cadmeed ay ku yeellatay ganacsigii Somaliland ;Iyado laga taxadirayo , dib- u dhac dambe oo ku yimaada Doorashooyinkan iyo mudo kordhin soo noq-noqota Iyo dhammaystir la’aan qabyooyinka taagan ;
Markuu arkay Qoddobka 42aad faqradiisa seddexaad ee Dastuurka Jamhuuriyada somaliland ;
Markiuu arkay Qodobka 83aad faqradiisa 3aad iyo 5aad e Dastuurka dalka Jamhuuriyadda Somaliland;
Waxa la-laalay muddada doorasho ee ku cayiman warqadda lambar KDQ/XK/406/2015 ee 20/04/2015, kana soo baxday xafiiska koomishanka Doorashooyinka Qaranka , madama aanay
waafaqsanayn xeerka doorashada lambar 20/2001,qoddobkiisa 8aad oo u dhigan nuxur ahaan “in anay koomishanku cayimi Karin muddo/maali doorasho oo ka baxsan dhammaadka muddo xileedka Madaxwaynaha, ku xigeenka iyo Golaha wakiiladdaba, ‘’sido kalana anay waafaqsanayn qoddobada 42aad iyo 83aad ee Dastuurka JSL .
Waxa muddo xileedkii Madaxwaynaha iyo ku xigeenka Madaxwaynaha oo ku eg 27/7/2015, lagu sammeeyay korodhsiimo ka bilaabmaysa 28/7/2015 illa 27/4/2017.
Golaha Wakiiladda oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku egyahay 27/7/2015, lagu sammeeyay muddo korodhsiimo ka bilaabmaysa 28/7/2015 illa 27/4/2017.
Muddo xileedka Golaha Guurtiddu wuxu noqonayaa hal sano ka dib (one year after) dhammaadka muddo xileedka Golaha wakiiladda oo noqonaya 27/4/2017, sida waafaqsan ama ku cadba go’aanka lambar GW/KF-19/245/2003 ee 29/03/2003, una dhigan “in muddada xilka Golaha Guurtiddu markastaba hal sano ka dambayso taariikhda dhammaadka muddada xilka Golaha wakiiladda ” .
Doorashada Maddaxtooyada iyo Golaha Wakiiladdu waxay qabsoomayaan isla hal wakhti, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyay , oo waafaqsan qoddobadda 42aad iyo 83aad ee Dastuurka Dalka Jamhuuriyada Somaliland .
B- Wajibadka la kala qabanayo, la wada qabanayo iyo hawlaha la dhammaystirayo Iyadoo xukuumaddu horumuud ka ah , waa in si deg-deg ah qorshe dhammaystiran oo iskaabaya ( comprehensive and special programme ) oo qaran lagu wajaha Gobolada iyo Degmooyinka Barriga , oo laga taabo- galiyaa maamul adag iyo amni, si looga suurto- galiyo diwaangelin muwaadin , cod-bixiye iyo doorashaba .
Komishanka Doorashooyinka Qaranka waxa waajib ku ah in ay ku tallo –galaan siddi Degmo kasta iyo Gobol kasta looga hirgalin lahaa diwaan-gelin muwaadin , codbixin iyo doorashaba.
Komishanka Doorashoyinka qaranku , waa in ay ku tallaabsadaan barnaamij wax ku ool ah oo horseedaya doorashooyin xor iyo xalaal ah, qof kastaana ku dhiiban karo hal cod oo keliya, isla -marahaan –taana siiyaan muwaadiniinta isdiwaan-gelinaysa wakhti ku filan.
Komishanka waxa waajib ku ah ku dhaqanka shuruucda iyo Dastuurka dalka JSL.
NB waxaa ku lifaaqan halkani liistadii Guddigga ,xubnihii madasha fadhiga ka qayb-galay.Allaa Mahad leh”